महिना द्वारा क्राइमन जलवायु
कुनै पनि छुट्टी महत्त्व जलवायु लागि। क्रिमीआ धेरै vacationers आज चयन गर्नुहोस्। तपाईं जो महिना आफ्नो छुट्टी योजना राम्रो छ, अग्रिम सिक्नुपर्छ किन छ।
यसको उदार सूर्य क्राइमन प्रकृति को वैभवशाली देर XIX सताब्दी देखि ज्ञात गरिएको छ। उहाँले बाँकी र शाही परिवार को एक स्थानको रूपमा परिचित थियो। यो वास्तवमा रमणीय वास्तुकला को एक ठूलो संख्या को प्रायद्वीप को उद्भव को योगदान गरे। मनोरञ्जन वर्षौंदेखि यहाँ लोकप्रियता, कम छैन। सोभियत संघ को युग मा, क्रिमीआ लागि सचिव-जनरल एक रिसोर्टमा भयो। यो दिन, यो एक पर्यटक गन्तव्य धेरै लोकप्रिय छ। रिसोर्ट्स को एक विशाल संख्या मा गर्मी मौसम मा बिदा खर्च र युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका देखि छिमेकी राज्य को बासिन्दा, तर पनि आगंतुकों मात्र होइन स्वास्थ्यलाभ गर्नु लागि।
त्यहाँ मई को बीचमा पौडी खेल्न थालेका छन्। कारण किनभने सानो गहिराई 20 डिग्री गर्न तीव्र गतिमा warms जो Kerch Strait, मा निहित। पानी तातो गर्मी समयमा 25-26 ° C गर्न warms।
को Azov सागर मा आराम लोकप्रिय छ, तर कम काला सागर तट। स्थानीय रिसोर्ट्स बच्चाहरु संग र गहिराई डराउँछन् गर्नेहरूका लागि परिवारको लागि उत्तम हो। यो उहाँ सम्झनुहुन्छ तखतालाई कारण हावा गर्न turbid बन्न सक्छ लायक छ। वसन्त मा, क्रिमीआ को सबै भन्दा राम्रो जलवायु - यो Azov समुद्रको किनारा मा छ।
पर्यटक अनन्त स्ट्रिम यो स्थान मध्य-जुन मा गर्न बगालको। Vacationers समुद्र तटों, सुन्दर देहात कमै मात्र छन् जो भर्नुहोस्। केही आफैलाई अरूलाई तिनीहरूले स्वास्थ्य लाभ समय बिताउन हुनेछ जहाँ छोराछोरीको शिविरमा, आफ्नो बच्चाहरु पठाउन प्रयास गर्दै गर्दा, यो चिरपरिचित स्वास्थ्य रिसोर्ट्स पठाइयो।
यो प्रायद्वीप प्रकृति को कदर कुनामा जहाँ कुनै मानिस अघि भएको छ रह्यो। मान्छे जो सँगै जनसंख्याको सबैभन्दा फरक खण्डहरूमा ल्याउन यी ठाउँहरू, र चाडहरूमा एक किसिम, आकर्षित छन्।
यो टिप्पण लायक छ Crimea मा मूल्य, को स्तर केहि अन्य युरोपेली रिसोर्ट्स भन्दा कम छ। यो कि सेवाको स्तर पनि साँचो हो। क्रिमीआ को सेवा को गुणस्तर मा पनि टर्की पुग्न सक्दैन। तर यी ठाउँहरू को जलवायु बढी उपयोगी र हाम्रो जीव थप accustomed छ। र गुणस्तर बाँकी यसलाई महत्वपूर्ण जलवायु छ। को गर्मी महिनामा क्रिमीआ मनोरञ्जनको लागि अनुकूल छ।
काला सागर मा गर्मी को सुरु संग स्विमिंग सिजन आउँदै छ। तट, विभिन्न रिसोर्ट्स को एक ठूलो संख्या साथ। चट्टानी, ग्राभेल वा बालुवा: तपाईं हरेक स्वाद को लागि एक समुद्र तट टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ। प्रारम्भिक गर्मी गरेर, समुद्र तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस पुग्यो।
यसलाई ध्यानमा सार्ने पर्छ भनेर पर्याप्त पानी न्यानो राख्न भनेर क्रिमीआ बारम्बार चिसो धाराहरु को दक्षिण मा। यस्तो ठाउँमा, पानी तापमान केहि कम छ। तपाईं महिना द्वारा क्रिमीआ को जलवायु थाहा छ भने, तपाईं बौद्धिक आफ्नो छुट्टी योजना गर्न सक्नुहुन्छ।
शरद ऋतु को पहिलो आधा पर्यटक मंदी प्रवाह विशेषता। त्यहाँ मखमल गर्न समय, को शान्त सिजन गर्दा वस्तुतः कुनै पर्यटकहरु आउँछ आउछ। प्रारम्भिक शरद ऋतु, मूल्य Crimea मा, आराम लगभग दुई पटक कम।
सेप्टेम्बर को सारा को मखमल सिजन मानिन्छ छ। यस समयमा, छैन पनि शरद ऋतु को गन्ध। सूर्य रूपमा scorching छैन र दिनमा हावा तापमान धेरै कम छ। समुद्र पानी तापमान therein छैन 20 भन्दा कम डिग्री छ रूपमा, पौडी लागि उपयुक्त अझै पनि छ।
किनभने यो बिस्तारै ठंडा, अक्टोबर को सुरुमा - यो अवधि सेप्टेम्बर मा Azov समुद्र र काला मा समाप्त हुन्छ। मूल्यहरु कम र पर्यटक संख्या घट्यो गर्दा, कि मई मा संचालित ती तुलना रहेको छ। यो सिजन सबै लाभ गणना छैन। शरद ऋतु मा Crimea मा जहाँ सबै भन्दा राम्रो जलवायु चिन्ता छैन आवश्यक छ। उहाँले सबैतिर उत्तिकै राम्रो छ।
जाडो - यो स्किइङ प्राप्त गर्न समय
Crimea मा 600 भन्दा बढी विशेष sanatoriums छन्। प्रत्येक यसको आफ्नै प्रोफाइल र स्वास्थ्य कार्यक्रम छ। विभिन्न रोगबाट को उपचार को लागि विभिन्न मौसम फिट। तर सबै भन्दा प्रक्रियाहरु लागि आदर्श न्यानो वसन्त वा शरद ऋतु मौसम छ।
सिजन skiers जाडो को बीचमा खोल्न, र यो मार्च अन्तिम दिन सम्म टिक्न हुनेछ। तापमान -1 -10 डिग्री को दायरामा राखिएको छ। स्किइङ र स्नोबोर्डिङ लागि ठूलो जलवायु छ। क्रिमीआ पर्यटक छुट्टी वर्ष राउन्ड लागि छाँटकाँट।
उत्तरी गर्मीयाम मा दक्षिण सुख्खा छन् - भिजेको। हिमालहरू, शुष्क गर्मी, तर धेरै हिउँ हिउँदमा। हिउँ छोटो पर्छ। दक्षिण मा, वर्षा को थोक जाडो को बीचमा पतन र उत्तर मा - गर्मी को बीचमा। पश्चिमी र पूर्वी क्रिमीआ वर्षा वर्ष भर समान रूप प्रदान। हामीलाई महिना द्वारा क्रिमीआ को जलवायु थप विवरण विचार गरौं।
Crimea मा मार्च अप्रत्याशित छ। अप्रिल मा, वार्मिंग सुरु, र मई खुसी गर्मी मौसम छ। वसन्त मा दिन तापमान बारेमा +10 ° सी
गर्मी क्राइमन तीव्र गर्मी र उच्च आर्द्रता मा विशेषता। जुन को scorching सूर्य र greenery प्रसन्न। जुलाई मा, steppe क्षेत्रमा पहेंलो बारी, र दक्षिण को प्रशस्त वर्षा गर्न बेतहाशा जीवित धन्यवाद बढ्दै छ। दिन तापमान - 25 भन्दा बढी ° सी
क्राइमन शरद ऋतु सुन्दर छ। गिरावट को पहिलो आधा पौडी लागि राम्रो छ। त्यसपछि वर्षा र बलियो हावा को सिजन आउँछ। लगभग 20 ° सी - को दिन मा तापमान
जाडो महिनामा Crimea मा धेरै थोरै छन्। हिउँ आवरण सधैं पतन र एक हप्ताको भन्दा अब रहन्छ। तर पहाड मा, हिउँ स्थिर छ र तपाईं स्की सिजन खोल्न अनुमति दिन्छ। क्षेत्र बलियो हावा र आँधीबेहरी द्वारा विशेषता छ। दिन तापमान - अधिक छैन +10 ° सी
क्रिमीआ - बाँकी र रिकभरी लागि ठूलो ठाउँ। यो प्रारम्भिक को गर्मी वा सेप्टेम्बर त्यहाँ जान राम्रो छ। यस समयमा, Crimea मा, एक स्वस्थ छुट्टी लागि इष्टतम अवस्था।
Crimea मा के गर्न?
पक्कै छैन बाँकी अन्तिम मूल्य जलवायु छ। क्रिमीआ सबै पक्षहरूमा मा अनुकूल छ। साथै, हेर्न केही छैन।
आकर्षण प्रायद्वीप सबैलाई रोचक र मनोरंजक कुरा पाउनुहुनेछ। त्यहाँ धेरै रोचक ठाउँ हुन्:
संग्रहालय र ग्यालरीमा;
प्रकृति को अनुपम सिर्जनाहरू।
यी साइटहरूमा अनुपम प्राकृतिक पार्क हो। यो वसन्त र शरद ऋतु मा सबै भन्दा राम्रो छ पर्यटन भाग।
को प्रायद्वीप मा मनोरञ्जन घटनाहरू र चाडहरूमा विभिन्न चल्छ:
शहर दिन, विशेष गरी प्रत्येक ईलाका मा मनाइन्छ जो।
पप स्टार र अन्य सेलिब्रेटीहरू को प्रदर्शन।
प्रतिभा प्रतियोगिताहरूमा, फिलिम चाडहरूमा र संगीत।
विभिन्न चाडहरूमा: शिल्प, कला, नृत्य, पाक।
विभिन्न खेल मा rallies, बाइक शो र प्रतियोगिताहरु सबै प्रकारका।
रूसी नौसेना छुट्टी।
अब तपाईं Crimea मा जलवायु कस्तो, र सम्भव मनोरञ्जन कस्तो थाहा छ। आफ्नो छुट्टी सही योजना!
सबैभन्दा थिएटर Krasnogorsk: तस्बिर र समीक्षा
संग्रहालय "टम्स्क Pisanitsa": प्रविष्टि, समीक्षा, निर्देशन र फोटो को लागत
Webalta ब्राउजर कसरी हटाउने
क्रिश्चियन Karembeu: फोटो, व्यक्तिगत जीवन, पत्नी
को endocrine प्रणाली - असामान्य सञ्चालनको लक्षण।
उपयुक्त राइम शब्द "तत्काल"
फर छाप: कलाकार र चतुर
भान्सा र घर फूल लागि माटो बर्तन
पुरातन जापान: द्वीपहरु को संस्कृति र सीमा शुल्क
एक शौक र कला रूपमा बोतल सजाय